सेलिब्रेटी बन्न ब्राउन सुगरको सहारा ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
मङ्गलवार, पुस २७ २०७८
कुनै एउटा विद्यालयमा ‘नागरिक तथा नैतिक शिक्षा’ अध्यापन गराउने एक शिक्षकले कक्षामा सुर्ती (खैनी) मोल्दै विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै रहेछन् । पढाउनै छोडेर खैनी मोल्न थालेपछि एउटा विद्यार्थीले सोधेछन्, ‘सर तपाईले के गर्नुभएकोे ?’
जवाफमा शिक्षकले कड्केर भनेछन्, ‘देखिनस्, खैनी मोलेको ।’
विद्याथीले पुनः प्रश्न तेर्स्याउँदै भनेछ, ‘सर तपाईं नैतिक शिक्षाको पहिलो पाठमा नै असल बानी व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । खराब व्यवहार आफू पनि गर्नु हुँदैन, अरूलाई पनि सिकाउन हुँदैन भनेर भन्नु हुन्थ्यो होइन ?’
. लाउरेलाई थप ११ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
शिक्षक सुरुमा त अकमक्क परेछन्, तर पनि जवाफ दिनैपर्ने ठानेर भनेछन्, ‘हेर नानीबाबूहरू ! म जे भन्छु, त्यो गर । तर म जे गर्छु त्यो नगर !’
यो एउटा उदाहरणीय किस्सा हो । तर ठ्याक्कै यो किस्सा, अहिलेका सेलिब्रेटीहरूमा लागू हुन्छ । सेलिब्रेटी भनेका त्यस्ता नागरिक हुन्, जसको धारणा, व्यवहार, आनीबानीदेखि लाखौँ मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् । जीवनयापन, बानी व्यवहार अनुसरण गर्न आम सर्वसाधारणले ती व्यक्तिहरूलाई सेलिब्रेटीका रूपमा उभ्याइदिन्छन् । सेलिब्रेटी बन्न कसैको भोट, पहुँच चाहिँदैन । अपवादमा कोही भए होलान्, तर प्रायःजसो सेलिब्रेटी बन्नेहरूले जनमानसमा राम्रो छाप छोडेकै हुन्छन् ।
केहीले सेलिब्रेटी बनेपछि ती आफूलाई सेलिब्रेटी बनाउनेहरूको छातीमा लात हानेका कयौँ उदाहरण छन् । तर जसले आफ्ना ‘फलोअर्स’हरूको भरोसा तोडेका छन्, त्यस्ताले माटोमा बिलाएका उदाहरण पनि छन् । उदाहरणमा विभिन्न ‘बाबा’हरूलाई लिन सक्छौँ, जो आफ्ना अनुयायीहरूको विश्वास जोगाउन नसकेर ‘ढोँगी बाबा’ कहलाएका छन् ।
धर्ममा मात्र नभएर कलाकारिता क्षेत्रमा अब्बल रहेकाहरूले पनि असल कर्म गर्न सिकाएर आफू नै खराब बाटोमा लागेका उदाहरण छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा मान्न सकिन्छ, र्‍यापर आशिष राना मगर ‘लाउरे’लाई । उनी त्यही लाउरे हुन्, जसले हिमालयन टिभीबाट प्रशारण हुने ‘हिमालय रोडिज’ शोमा आउने प्रतिस्पर्धीहरूलाई लागुऔधष सेवन नगर्न सुझाव दिन्छन् । खराब बानी त्यागेर असल कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्छन् । तर उनै लाउरे अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । कारण हो, लागुऔषध सेवन गर्ने खराब बानी ।
कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन वा स्थापित हुन त्यससँग सम्बन्धित कुराको अम्मल हुनैपर्छ । तर कलाकारितामा अब्बल ठहरिएका ‘सेलिब्रटी’ भने प्रतिभा, साधना, अभ्यासको होइन, नशालु पदार्थको अम्मल राख्छन् ।
‘केस नम्बर ४२०’ भन्दै यौनसँग सम्बन्धित विषय केलाएर चर्चित ‘लाउरे’ विरुद्ध अहिले लागुऔषध ‘केस’ मा म्याद थप भइ अनुसन्धान भइरहेको छ । पुस ४ गते बुधबार राति ७ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा महानगरपालिका–८ जाल्पा रोडबाट लाउरेलाई ब्राउन सुगर कारोबारीहरूसँगै पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले नयाँबजारका ३२ वर्षीय लाउरेसहित, पोखरा ११ का ३९ वर्षीय ध्रुवबहादुर थापा, पोखरा ७ का ३० वर्षीय नवीन गुरुङ र पोखरा ८, सभागृहका २२ वर्षीया सुस्मिता गुरुङलाई ब्राउन सुगर सेवन गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता प्रहरीको थुनामा रहेका लाउरे ब्राउन सुगरको कारोबारी नभइ ‘प्रयोगकर्ता’ मात्र भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
लाउरेले नवीन गुरुङसँग ब्राउन सुगर किन्न खोजेका थिए । कास्की प्रहरीले लाउरेमुनि कुनै ग्राहक नभेटिएको जनाएको छ । युवापुस्तामाझ चर्चित लाउरेले लागुऔषध सेवन गर्ने स्वीकारिसकेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा उनले कास्की प्रहरीलाई ब्राउनसुगरबिना स्टेज चढ्नै नसक्ने बयान दिएका थिए । हो, उनी ‘युजर’ मात्र होलान्, तथापि यसबारे अनुसन्धान जारी छ । तर एउटा सेलिब्रेटी अनि लागुऔषध कारोबारीसँग पक्राउ परेका कारण पनि उनीविरुद्धको अनुसन्धान लम्बिएको छ ।
पोखरा नयाँबजारका राना ‘रअ बाज’ र्‍याप ब्याटलपछि चर्चामा आएका थिए । पछि उनी लाहुरे, मेरो सोल्टा, हाउडे, केस नं ४२०, पोखरालगायत गीतबाट युवापुस्तामाझ लोकप्रिय बनेका थिए । उनले गीतसंगीत हुँदै तान्डव नामक फिल्ममा समेत कलाकारका रूपमा काम गरिसकेका छन् । यी सबैमा उनी आम सर्वधारण वा आफ्ना फलोअर्सलाई असल काम गर्ने प्रेरणा दिन्छन् । तर आफू ब्राउन सुगरबिना स्टेज नै चढ्न नसक्ने भनी दिएको उनको बयानले नशालु पदार्थबिना सेलिब्रटी बन्न असम्भव रहेको जनाउँछ ।
हिमालय रोडिजका निर्णायकसमेत रहेका उनी अब पुनः सो कार्यक्रममा फर्केलान् त ? यो आगामी दिनले नै बताउँला तर आफूलाई फलो गर्नेहरूको भरोसामा लात हान्नुअघि उनले कयौँ पटक सोच्न जरुरी थियो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्गलवार, पुस २७ २०७८ १२:२९:२९
#आशिष राना मगरर्‍यापरलाउरे